KDE Gear 21.08 inouya nenhau zhinji, shanduko uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
KDE Gear 21.08 inouya nenhau zhinji, shanduko uye nezvimwe
Mazuva mashoma apfuura gadziriso kuburitswa kwakafumurwa kuwanda kwekushandisa kwaNyamavhuvhu (21.08) yakagadzirwa neKDE Project, iyo yava kunzi "KDE Gear", panzvimbo yeKDE Apps uye KDE Applications. Pakazara, sechikamu chekuvandudza, shanduro dzezvirongwa mazana maviri nemakumi maviri nenomwe, maraibhurari nemapulagini aburitswa.
Pakati pechinonyanya kushandurwa chinomira kunze kweshanduro nyowani tinogona kuzviwana muDolphin kugona kwekuongorora zvirimo mumadhairekitori kwakagadziriswa kuburikidza ne thumbnail kuratidza: kana paine huwandu hukuru hwemafaira mudhairekitori, kana iwe ukatenderedza pamusoro pechitupa, zvigunwe nezviri mukati mazvo zvino scroll, zvichiita kuti zvive nyore kuona kuvepo kwefaira raunoda.
Muchikamu chemashoko, icho chinoshandiswa nekutsikirira F11 uye inoratidza ruzivo rwakadzama nezve mafaera uye madhairekitori, iyo data nezve saizi uye nguva yekuwana inovandudzwa munguva chaiyo, izvo zviri nyore kuteedzera kufambira mberi kwekurodha pasi uye kuoneka kweshanduko.
Mune iro gwaro muoni Okular, izvozvi zvave kugona kuwedzera bhatani kubha yekushandisa kuti uchinje iwo mavara uye ruvara rwemberi kubva pane peji kubva pamavara matema pane chena kumashure kune yakasviba tsvuku mavara pane grey kumashure, izvo zvinonyanya kugadzikana kuverenga, uyezve sarudzo yakapihwa yekudzima kuratidzwa kwemapop-up windows nezviziviso nezve mafaera, mafomu uye akaisirwa masiginecha .
Uyewo akawedzera marongero ekusarudza kuviga emhando dzakasiyana dzezvidudziro (simbisa, tara pasi, furemu, nezvimwewo). Paunenge uchiwedzera zvirevo, iyo yekufambisa uye yekusarudza modhi inoremerwa otomatiki kuitira kuti usangoerekana wasvetukira kune imwe nzvimbo uye sarudza mameseji eiyo clipboard pane kumaka chirevo.
Mune terminal emulator Konsole, rutsigiro rwekutarisa mifananidzo uye madhairekitori zvakawedzerwa: paunenge uchifamba pamusoro pezita refaira nemufananidzo, mushandisi anozoratidzwa thumbnail yemufananidzo, uye kutenderera pamusoro pezita redhairekitori, ruzivo nezve izvo zvirimo.
Kana akati wandei tabo achida kuratidzwa panguva imwe chete, bhatani nyowani rakarongedzwa pabhara rekushandisa uye mubatanidzwa Ctrl + "(" naCtrl + ")" wawedzerwa, zvichikubvumidza iwe kupatsanura hwindo uye kuratidza akawanda tabo pa kamwe.
Iyo inomirawo zvakasiyana zvakasiyana iyo SSH plugin, iyo inobvumidza kuita zviito kune ekunze mauto, semuenzaniso, nerubatsiro rwayo unogona kugadzira dhairekitori pane imwe sisitimu iyo yekubatana neSSH yakagadzirirwa. Kugonesa iyo plugin, shandisa iyo "Mapulagini> Ratidza SSH maneja" menyu, mushure meizvozvo padivi pechikamu ichaonekwa ine rondedzero yeSSH inomiririra yakawedzerwa ku ~ / .ssh / config.
Mumufananidzo muoni Gwenview, basa rakaitwa kuwedzera mashandiro uye kugadzirisa echimiro. Ikona yezasi yekurudyi inopa nyowani nyowani seti yemabhatani ayo anotendera iwe kukurumidza kushandura chiyero uye saizi, pamwe nekushandura iyo yekumashure ruvara.
Panguva yekufamba, ikozvino unogona kushandisa museve mabhatani uye makorori makiyi iri pane pani kuti uchinje kubva pane mumwe mufananidzo uchienda pane mumwe. Iwe unogona kushandisa iyo bara repamhepo kumira uye kutangazve kutamba kwevhidhiyo. Wakawedzera rutsigiro rwekuratidzira mifananidzo ine 16-bit color pane chiteshi uye kuverenga mavara profiles kubva kumafaira mune akasiyana mafomati. Iyo hamburger menyu inoratidzwa mukona yepamusoro yekona yakagadzirwazve, ichipa mukana kune zvese zviripo sarudzo.
Chitarisiko chinopa mukana wekugadzira skrini yehwindo pane iyo inotora iri mbeva (yakaitwa nekudzvanya Meta + Ctrl + Dhinda). Zvakanyanya kuvandudzwa kuvimbika munzvimbo dzeWayland-dzakavakirwa.
Kate akaita kuti zvive nyore kushanda nema snippet matemplate iyo zvino inogona kutorwa pasi kuburikidza neDiscover Application Manager. Iyo Dart programming mutauro inotsigira LSP (Mutauro Server Protocol).
KuKdenlive, takachinjira kuchikamu chitsva cheMLT 7 chimiro, izvo zvakaita kuti zvikwanisike kuita maficha senge ekuwedzera shanduko mukumhanya kwechikamu kune iyo nhamba yemakiyi emigumisiro.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kuzviita pane ino peji uko iwe kwaunogona zvakare kuwana ruzivo nezve kuwanikwa kweRarama magungano neshanduro nyowani dzekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » KDE Gear 21.08 inouya nenhau zhinji, shanduko uye nezvimwe
LibreELEC 10.0 Matrix inosvika neKare 19.1, inotsigira inovandudza RPi 4 uye nezvimwe
Robotic software yeLinux